तनहुँमा क्षयरोगका बिरामी पहिचान गर्न कठिन - नेपालबहस
तनहुँमा क्षयरोगका बिरामी पहिचान गर्न कठिन
| १४:४२:५२ मा प्रकाशित
११ चैत,दमौली । नेपालमा दैनिक १८९ क्षयरोगका बिरामी थपिने गरेको तथ्याङ्क रहे पनि तनहुँमा भने क्षयरोगका बिरामी पहिचान गर्न कठिन भएको छ । विगत एक वर्षकोमा कोभिड सङ्क्रमणका कारण क्षयरोगका बिरामी पहिचान गर्न कठिन भएको हो ।
कोभिड सङ्क्रमणका कारण कोभिड न्यूनीकरणमा खटिनुपर्दा क्षयरोगका बिरामी पहिचान गर्न नसकिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अधिकृत कृष्णप्रसाद सुवेदीले बताए । यद्यपि अशिक्षा, अज्ञानता र भौगोलिक कारणले पनि क्षयरोगी उपचारको पहुँचमा आउन नसकेको सुवेदीको भनाइ छ । “क्षयरोगी पहिचान गरी उपचारको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने विद्यमान चुनौती छ”, सुवेदीले भने, “त्यसका लागि सबै पक्षको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ ।”
सन् २०५० सम्म नेपाल क्षयरोगविहीन बनाउने लक्ष्य छ । त्यसका लागि क्षयरोगका बिरामी पहिचान गरी उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुवेदीले बताए । “उपचारमा नरहेको एक क्षयरोगीले औसतमा १० देखि १५ स्वस्थ्य व्यक्तिलाई रोग सार्न सक्छ”, उनले भने, “सो तथ्याङ्कलाई घटाउन पनि नयाँ क्षयरोगीको पहिचान आवश्यक छ ।”
क्षयरोगी पहिचानका लागि कार्यालयले शङ्का लागेका व्यक्तिको घरमा पुगेर नै खकार सङ्कलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । “दुई हप्तासम्म खोकी लागेका शङ्कास्पद व्यक्ति पत्ता लागे घरमै पुगेर खकार सङ्कलन गरी परीक्षणको व्यवस्था मिलाएका छौँ”, सुवेदीले भने । क्षयरोगी पहिचानका लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको व्यवस्था पनि छ । सुवेदीका अनुसार ६ महिनामा दुईपटक कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिन्छ । दुई महिनामा पहिलोपटक र ६ महिनाभित्र अर्को पटक गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सुवेदीका अनुसार क्षयरोगी भएको घरका पाँच वर्षमुनिका बच्चालाई क्षयरोग छैन भन्ने प्रमाणित भएको खण्डमा तीन महिनासम्म औषधि खुवाइने गरेको छ । “घरपरिवारका सदस्यबाट नसरोस् भन्नका लागि उनीहरूलाई पनि औषधि खुवाउने व्यवस्था मिलाइएको हो”, उनले भने ।
लुकेर बसेका क्षयरोगीलाई पहिचान गर्न नसकिए जोखिम बढ्ने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँका प्रमुख शङ्करबाबु अधिकारी बताउछन् । “पछिल्लो एक वर्ष कोभिडका कारण समस्या भएको हो, तर जनशक्ति अभाव, अज्ञानता र अशिक्षा नै यसको मुख्य कारण हो”, अधिकारीले भने । अधिकारीका अनुसार लुकेर बसेका क्षयरोगी पत्ता लगाउन जन्तर भन्ने संस्थाले गाउँगाउँ पुगेर सहयोग गरिरहेको छ । “नियमित औषधि सेवन गरे क्षयरोग निको हुन्छ, यसको प्रचारप्रसार गर्दै क्षयरोगीलाई उपचारको पहुँचमा ल्याउनुपर्छ”, अधिकारीले भने ।
समुदायमा रहेका क्षयरोग बिरामीको परीक्षण २ महिना पहिले
भारतले सन् २०२५ सम्म क्षयरोगको संक्रमण अन्त्य गर्ने ७ महिना पहिले
उदाउँदो सूर्यलाई अघ्र्य दिँदै सकियो वासन्ती छठ ७ मिनेट पहिले
अझै खुल्न सकेनन् म्याग्दीका बन्द चिज उद्योग १२ मिनेट पहिले
टीकापुरमा आगोले पोलिएका १७१ को निशुल्क शल्यक्रिया १९ मिनेट पहिले
विद्यालय बन्द गर्ने लगायत सिसिएमसिका प्रस्तावहरू परिमार्जनसहित पारित २० मिनेट पहिले
२३ वर्षअघि सामूहिक लगानीमा किनेको डोजर कवाडी बन्दै २७ मिनेट पहिले
आईपीएलः आज चेन्नई र राजस्थानको म्याच भिड्दै, यस्तो छ सम्भावित प्लेइङ–११ ३१ मिनेट पहिले
मष्टा पूर्ण खोप सुनिश्चितता गाउँपालिका घोषणा ३५ मिनेट पहिले
५ अर्ब २० करोड बराबरको ट्रेजरी बिल विक्री गर्दै राष्ट्र बैंक ४० मिनेट पहिले
सिभिल बैंकका सीईओ गुरुङको राजीनामा स्वीकृत ४६ मिनेट पहिले
महाधिवेशन सार्नेबारे राप्रपाको बैठक आज बस्दै ४८ मिनेट पहिले
‘काभ्रे भ्याली’ स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि एक अर्ब बजेट ५० मिनेट पहिले
शहरी क्षेत्रको विद्यालय बन्‍द गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय ५३ मिनेट पहिले
पाँच कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट, प्रतिकित्ता मूल्य कति ? ४ दिन पहिले
साधनास्थलको रुपमा विकास हुँदै हरिहर गुफा सन्यास आश्रम ५ दिन पहिले
उखान टुक्का तथा व्यंङगबाणको अत्याधिक प्रयोगले रङ्गमञ्च बनेको नेपालको राजनीति ३ हप्ता पहिले
डा. शेखरद्वारा सम्पुर्ण नेपालीमा नयाँ वर्ष २०७८ को शुभकामना व्यक्त ५ दिन पहिले
सेनाको सहयोगमा कर्णाली कोरिडोर निर्माण तीव्र २ हप्ता पहिले
दूध नबिक्दा किसान चिन्तामा, दैनिक १३ लाख क्षति ४ महिना पहिले
भारतमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या साढे १८ हजार ! १२ महिना पहिले
मिस्ट्रीखोलाको विद्युत् उत्पादन एक महिनाभित्र शुरु गर्ने तयारी ४ महिना पहिले